Ny tia kely, tsy mahazo be… | NewsMada
Amin’izao fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika izao, resabe hatrany ny amin’ny volabe ampiasain’ny kandidà. Amin’izany, tsy ilaozan’izay manao fafy katrana: fampielezam-bola no atao fa tsy fampielezan-kevitra. Lany hevitra ka mandany vola? Na tsy manantena ho voafidy fa manahy tena ka any amin’ny vola no manala vonkina.
Amin’izany ihany koa, mandeha ho azy ny resabe hoe: hano fa adala tompo. Iza no mahalala izay vato harotsaky ny tena amin’ny androm-pifidianana? Noho izany, misy ny olom-pirenena tsotra amin’ny vahoaka ifotony izay sahirana mahavatra mikarama tsotra izao amin’izay kandidà mihetsika na manetsika azy. Mba fanararaotana izao fa tsy impiry.
Tsy misy fofona ny vola. Rahoviana no hangidy? Resaka amin’izao ihany koa ny amin’ny fisian’ny fanadiovana vola maloto tsy fanta-piaviana, ny fiparitahan’ny vola sandoka. Amin’izany rehetra izany, misy ny tafaroboka lalina ary mila tsy hahatsiaro tena intsony amin’ny fitadiavana: vola avokoa izay mihetsika sy ihetsahana rehetra.
Iza no omen-tsiny raha efa ho lava ny fahasahiranana? Na izany aza, sao marina ny hoe: ny an’ny tena ihany no hanajan’ny sasany ny tena; na izay miditra amin’ny makarakara, mivoaka amin’ny loadoaka… ? Izay tia kely ao anatin’ny fotoana fohy, tsy hahazo be mandavantaona. Ny vola ve no ndeha hamaritana ny safidin’ny tena amin’ny fifidianana?
Mihetsika ny mpividy rehefa misy ny manaiky vidina. Tsy fotoan’ny fanovana sy fiovana ve izao? Mba manova fitana izay te ho voafidim-bahoaka ka vinam-piarahamonina tian-kajoro sy ny fandaharanasa amin’izany no handresen-dahatra ny mpifidy; ny mpifidy, izay maharesy lahatra, no hanapahan-tsafidy fa tsy izay karazam-panomezana ividianana ny tena.
Sao tia kely mandritra izao fampielezan-kevitra izao àry ka tsy mahazo be mandritra ny fe-potoam-piasan’izay voafidy eo? Tsy vola tsinona no aely amin’izao fa hevitra. Izay lany hevitra no mandany vola amin’ny tsy antony? “Trosa mbola haloa ny fampanantenana”, hoy ny ohabolana arabo izay. Aleo mandray be rahampitso toy izay mahazo kely anio?